3 Midab Smart Tecar Radiyo Frequency RF Maqaarka Adkaynta ST02
1. Ka-qaadista Laab-qaadista 2. Adkaynta maqaarka 3. Maareynta Xanuunka 4. Raaxada Murqaha
Shock Wave Therapy ultrasonlc Murqaha Paln Ka Saarida
Daaweynta naxdinta leh ee naxdinta leh ayaa u muuqatay ikhtiyaar daaweyn oo suurtagal ah oo loogu talagalay bukaanada qaba dhibaatooyinka maskaxda ee daba dheeraada. Nidaamku wuxuu adeegsadaa hawo la cadaadiyay ama hal-abuurka elektromagnetic si loogu gudbiyo hirarka naxdinta leh ee jirka si looga caawiyo daaweynta noocyo kala duwan oo xanuunno daba-dheer, oo ay ka mid yihiin: Plantar fasciitis, Calcific tendo ...
660nm mashiinka koritaanka timaha qurxinta timaha luminta timaha dib u soo celinta
Daaweynta Timaha ee Laser waa daaweyn aan kiimiko ahayn, oo aan faafin oo badanaa loo isticmaalo daaweynta timo luminta. (daaweynta heerka hooseeya ee laser-ka) waxaa keena qalab ay kujiraan qaybo laserser ah oo ka dhalaalaya madaxa. Waa nidaam sare oo daaweyn timo lumis laser ah, oo ku saleysan 660nm low -...
Bilowga sanadka cusub ee 2021, Zohonice waxay siideysaa dhiirigalin weyn moodooyinka Qalabka Qurxinta kulul. Waxaa ka mid ah mashiinka anti-ciridka ee 4DHIFU Ultra / Fractional CO2 Laser, maqaarka wajiga ogaanshaha mashiinka nadiifinta qoto dheer -Oxge Hydro, Tattoo ka saarista Laablaabista Xirfadlaha Q-Switch ND YAG l ...